afoola afaan oromo – OROMP4 Studio
2. Cimsuu fi dabarsuu
5. To’achuu: Gosooti afoolaa mala ykn tooftaa jireenyaatiifi amala gaarii barsiisanu, amaloonni hawaasa biratti jibbamanu akka hin babal’annes to’achuu nidanda’u. Hattuummaan, sobuun, doqnummaan, garaa-jabummaan, kkf amala gadhee ta’uu ibsu: Akka miseensonni hawaasaa irraa of-eeggatanu akeekkachiisu; nito’atu. Raawwilee hawaasa biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu.
* Beekan Gulummaa karaa email:Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha. Kanaafuu faayidaalee afoolaa kanneen jedhaman kunneen kanneen afoola maraaf ta’u qofaadha. Kana jechuunis waa’ee afoolaa yaadolee bu’uura ta’an gabbisuuf nigargaara jechuudha malee gosoonni afoolaa adda addadha. Fakkeenyaaf, mammaaksi,hibboon, geerarsi, sirbi aadaa, taphni ijoollee, kkf faayidaalee mataa isaanii kan qabanu ta’uu dagachuudhaan miti. Akkuma mammaaksi namootaaf beekumsa/barnoota dabarsuudhaaf fayyadu geerarsis barnoota dhaggeeffattootaaf dabarsu niqaba. Kun ammoo faayidaa tokkoof oolan jechuudha.
qunnamuun ni danda’ama.